Raha toa moa ka … tsy lanian’ny HCC i andry tgv
Friday, December 14, 2007 | Add a comment
Mandre resaka aho mandeha fa tsy manara-dalàna zato isan-jato hono ny Tanora malaGasy Vonona sy ny Tiako i Madagasikara tamin’iny fifidianana ben’ny tanàna farany teo iny. Eo amin’ny haben’ny sarin’ny kandida hono no tsy manara-penitra satria ngeza loatra ny sasany, toy ireny tamin’ny fiara ireny. Dia tsy mahay izay lalàna momba izany raha ny tenanay an!
Manamarika ireo mpitantara tsaho fa dia izy mirahalahy laharana voalohany sy faharoa mihitsy hono no nanao izany tsy fanarahan-dalàna izany. Tetika efa nomanin-dRamose mihitsy hono io, mahita raha koa ange ny malagasy sasany e! Ireny angamba no diso fanantenana fa mpomba an’i Savaron, sa ilay mamoron-tsaho mihitsy no tena mba fialamboliny?
Dia hoy aho hoe: Raha toa moa ka … ataon’ny HCC hoe disqualifiés izy mi-tsam fa tsy nanara-dalàna? dia izay kandidà be vato manaraka azy no lany ho ben’ny tanàna: i Arson miaraka amin’ny vato miisa 9723.
Et si … on jouait à la roulette russe
Thursday, December 13, 2007 | Add a comment
Ary raha toa moa ka tsy amin’ny alalan’ny fifidianana no nanendrena ny Ben’ny Tanàna? Ity antsapaka anankiray atao hoe Roulette russe ity no nampiasaina?
Asiana bala dimy ao anaty revolvera dia ahodina dia tifirina eo amin’ny lohan’ny kandidà tsirairay avy, ka raha sendra bala dia maty any iny, tsy misy mimenomenona intsony, raha tsisy bala dia iny no lany Ben’ny Tanàna.